Ndingalisebenzisa njani ikhadi lePayoneer ukuze ndifumane imali endiyibhatalwayo? - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Ndingalisebenzisa njani ikhadi lePayoneer ukuze ndifumane imali endiyibhatalwayo? – inqaku loncedo
Ndingalisebenzisa njani ikhadi lePayoneer ukuze ndifumane imali endiyibhatalwayo?
Seta indlela entsha yokubhatalwa
Emva kokufaka indlela yokubhatalwa, kuthatha ixesha ukuba iqinisekiswe. Xa iqinisekisiwe, imeko yayo iyatshintsha ithi Ilungile. Ixesha loku…
Ndazi njani ukuba indlela yam yokubhatalwa iyasebenza?
Ngokuqhelekileyo kwiintsuku zoshishino eziyi-7 nangaphantsi, imeko yendlela yakho yokubhatalwa ifanele itshintshe ithi “Ilungile” ibe uza ku…
Ungafaka okanye utshintshe iindlela zokubhatalwa kwiisetingi zeakhawunti yakho.